Advection: ihe ọ bụ, nkọwapụta na ihe atụ banyere ihe ịtụnanya a | Netwọk Mgbasa Ozi
Na meteoroloji ọ dị mkpa ịmụ mgbanwe mgbanwe anụ ahụ nke ikuku na-eme na oge iji buru amụma ihe ga-eme. Ikuku ọ bụ a ọkara ebe uka ngagharị eme nnọọ mfe. N'ụzọ dị otú a, a na-ekwe ka mgbanwe okpomọkụ ahụ site na mmegharị vetikal na nke kwụ ọtọ. A na-akpọ njem ụgbọ mmiri nke ikuku nke ikuku ndị ọzọ advection. Arịrịọ bụ ihe mgbaru ọsọ nke isiokwu a.
Anyị ga-enyocha mkpa ọ dị ịmara adveve nke dị na mbara igwe iji mata ihu igwe na mgbanwe ihu igwe. Want chọrọ ịmụtakwu banyere ya? Naanị ị ga-anọgide na-agụ 🙂
1 Gịnị bụ mmụọ
2 Njirimara adveve
3 Ihe na-akpata odide
4 Adiabatic jụrụ
5 Gbanwee na okpomọkụ n'ihi advection
Gịnị bụ mmụọ
Na ihu igwe, ọ bụ ihe a na-ahụkarị iji okwu a na-akpọ convection gosipụta mmegharị kwụ ọtọ. Uru nke ọsọ nke mmegharị ndị a anaghị agafe karịa ruo otu narị nke agagharị agagharị. Yabụ, enwere ike ichiche na igwe ojii na-akwụrụ ọtọ na-akpụpụta nwayọ nwayọ ma nwee ike iburu ụbọchị niile.
Ihe a na-edoghị anya nke ikuku mmadụ na-eme n'ọtụtụ ebe n'ụwa. Ọ bụ nke na-ebufe ike ọkụ site na mpaghara ebe okpomọkụ ka ọ banye na mpaghara polar. Ha nwere ikike isi n’otu akụkụ ụwa gafere n’akụkụ nke ọzọ, na-eme njem ọtụtụ puku kilomita site na ya. Ọ bụ ụgbọ njem a dị mkpụmkpụ bụ nke dị mkpa ma sie ike karịa ike ikuku dị nfe.
Na ihu igwe na oke osimiri, a na-ekwukarị okwu banyere adveve na-ebuga ụfọdụ ihe onwunwe nke ikuku ma ọ bụ oké osimiri, dị ka okpomọkụ, iru mmiri ma ọ bụ nnu. Mgbasa ihu igwe ma ọ bụ nke ihu igwe na-esote ihe ndị dị na mbara ihu ma ọ bụ ya mere a na-ahụkarị ya. Ya na njem nke ihe nke ikuku site na ikuku.
Iji ghọtakwuo echiche a nke ọma, anyị ga-enye ụfọdụ ihe atụ nke nkwanye ọkụ na oyi. Advedevem na-ekpo ọkụ bụ ikpo ọkụ nke ifufe na-ebuga ebe ọzọ. N’aka ozo, oyi advection bu ibu oyi rue ebe ndi ozo. Otú ọ dị, ha abụọ bụ transports ike ebe ọ bụ na, ọ bụ ezie na ikuku dị na okpomọkụ dị ala, ọ ka nwere ume.
Na amụma ihu igwe, okwu advection na-ezo aka njem dị ukwuu nke ihe ikuku kwụ ọtọ nyere. Ọ bụrụ na anyị nwere ntụ oyi, ọ na-eche na ọ ga-aga ihu na-ekpo ọkụ. Mgbe enwere advection na-ekpo ọkụ, ọ na-apụta n'elu ala na oyi na-atụ oyi na oyi na-apụta site n'okpuru.
Ihe na-akpata odide
E nwere ọtụtụ ụdị mmiri alụlụ mmiri. Nke mbụ bụ radieshon na nke abụọ bụ advection. Alụlụụ mmiri nwekwara ike ịdaba site na ịgwakọta igwe ikuku na ịjụ oyi site na mgbasawanye adiabatic. Nke abụọ bụ ihe kpatara igwe ojii igwe ojii kasịnụ.
Na ntụzigharị advective, a na-ebugharị ikuku ikuku na-ekpo ọkụ ma na-ekpo ọkụ na ntanetị, na-agbakwunye elu nke oyi ma ọ bụ ikuku ikuku.. N'ihi kọntaktị dị n'etiti mgwakota agwa na-ekpo ọkụ na oyi, ikuku ikuku nke mgwakota agwa na-adaba iji kwekọọ na oyi. N’ụzọ dị otu a, igwe ojii na-amalite ịpụta, ọ bụrụhaala mbelata nke okpomoku nke ihe n’ọkụ ahụ ruru ebe igirigi ma jupụta na mmiri.
Igwe ikuku radieshon na-ewere ọnọdụ mgbe ụwa na-ekpo ọkụ site na anyanwụ. Ihe oyi akwa kachasị nso na-amalite ikpo ọkụ n'ihi ya. N'ihi nke a, a na-etolite ikuku ikuku na-ekpo ọkụ na, n'ihi njupụta ya dị ala, ọ na-ebili ruo mgbe ọ ga-ezute ọkwa kachasị elu na oyi. Mgbe ha ruru ọkwa ndị dị elu, ọnọdụ okpomọkụ na-amalite ịda ma ha juputara, kechie ma mejupụta igwe ojii.
Ọ bụ n'ihi mgbanwe dị na okpomọkụ n'ihi nbelata nrụgide nke ikuku ka mmadụ na-arịgo elu. Ọtụtụ iyi nwere ike igbanwe jụrụ oyi a, nke a makwaara dị ka gradient gburugburu ebe obibi.
Mgbe ikuku na-ebili, ikuku ikuku na-ebelata. N'ihi nke a, mmeghari na esemokwu nke ụmụ irighiri na-ebelata, nke mere na ikuku dị mma. Ka ọ dị na mbụ, ọ na-agbadata ihe dị ka ogo 6,5 maka kilomita ọ bụla nke ịdị elu.
Ọ bụrụ na ikuku akọrọ, ọnọdụ okpomọkụ dị elu karịa (gburugburu 10 degrees maka kilomita ọ bụla n'ịdị elu). Kama nke ahụ, ọ bụrụ na ikuku juputara, nrida ya ga-abụ naanị 5 degrees kwa kilomita.
Gwé ojii bụ ihe mejupụtara obere mmiri, ice, ma ọ bụ ngwakọta abụọ. Emebere ha site na odide nke alụlụ mmiri na ikuku. Nke a na - eme advection iji bufee oyi site na igwe ojii banye na gburugburu ikuku ma gbasaa.
Gbanwee na okpomọkụ n'ihi advection
Advection nwere nkeji nkewa nkewa nkewa. Ọ na-egosi mgbanwe dị iche iche nke isi na-enweta n'ihi mbata nke ifufe nke na-ebu ikuku na ọnọdụ dị iche iche.
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na, ebe anyị na-atụ ikuku na-esite na mpaghara oyi, anyị ga-enweta ahụ jụrụ oyi na advection nke okpomọkụ ga-abụ ọnụọgụ na-adịghị mma nke ga-agwa anyị ogo ole ogo kwa otu oge nke okpomọkụ na-ada.
Ikuku jụrụ oyi nwere ike ime maka ọtụtụ ihe:
N'ihi okpomoku nke elu uwa a na-emepụta free convection site na ụzarị anyanwụ.
Site na ala okwu ala, N'ihi ịrị elu nke ikuku ikuku iji gafee ugwu ahụ, ntụgharị mmanye na-apụta.
Ikuku na-amanye na mpaghara ihu ọkụ na oyi, na -emepụta a kehoraizin ije nke a oyi ikuku uka, emeputara site na mmeghari uzo ka ikuku na-ekpo ọkụ ịrịgo.
Dịka ị pụrụ ịhụ, adveve bụ ihe dị oke mkpa iji buru n'uche na meteorology. Ọ na-eme ka ọnọdụ ya dị mma mgbe a bịara n'amụma ihu igwe na ịmara mgbanwe na nkwụsi ike nke ikuku.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Arịrịọ